ကြက်သား ပဲရည် သုပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကြက်သား ပဲရည် သုပ်
ကြက်သား ပဲရည် သုပ်
Posted by ဇီဇီ on Jan 7, 2013 in Food, Drink & Recipes | 33 comments
ဒီ တစ်ပတ်တော့ ကြက်သားပဲရည်သုပ်လေး စားကြမလား။
ဒီနည်းက သူငယ်ချင်းမလေး တစ်ယောက်ဆီက ရတဲ့ နည်း။ နည်းနည်း လွယ်သလိုရှိပြီး စားကောင်းလို့ မှတ်ထားတာ။
ဒီက ကြက်သားတွေက စားလို့မကောင်းဘူး။ အရသာမရှိဘူးပဲ ပြောရမယ်။ အဲ့ဒီလို ကြက်သားမျိုးကို အရသာရှိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းဆိုတော့ မဆိုးပါဘူးလေ နော့။
– ကြက်အကောင် သေးသေးတစ်ကောင်ကို နှုတ်သီး၊ ခြေသည်းစတာတွေဖြတ်ပြီး ဆား၊ နနွင်း၊ ငံပြာရည် နဲ့ အကောင်လိုက်ကို နှံ့အောင်နယ်ထားလိုက်။
– ကြိုက်တတ်ရင် ကြက်ရိုးအပိုတောင်းလာတာတို့၊ ကြက်မြစ်ကြက်သည်းတို့ရှိရင် ထည့်လိုက်ပါဦး။ အရသာနယ်ထားဖို့တော့ မမေ့နဲ့ ပေါ့ နော့။ တစ်ကောင်လုံး ကုန်တဲ့ လူအင်အားမရှိရင်တော့ ခုတ်ပြီးသား အသားကို သုံးပေါ့လေ။
– ပြီးရင် အိုး အနေတော်နဲ့ ရေမြုပ်ရုံ ထည့်ပြီး ပြုတ်လိုက်ပါ။ အဖုံးတော့ အုပ်ထားပါနော်။
– ရေ တစ်ဝက်လောက်ခမ်းသွားတဲ့ အချိန်လောက်ဆို အရိုးအသား နွှင်လို့ရတဲ့ အနေရောက်လောက်ပါပြီ။
– ကြက်သားတွေချည်းပဲ ဆယ်ထားပြီး (ခိုင်းစရာလူ တစ်ယောက်ရှိပါက ) အရိုးအသား နွှင်ခိုင်းလိုက်ပါ။ အရိုးပြိုင်းပြိုင်းကျအောင် နွှင်ခိုင်းတာ ဟုတ်ဘူးနော်။
– အသားတွေချည်းအကြမ်းလွှာ အတုံး သေးသေး တုံးထား။ အရိုးတွေကိုလည်း စားကောင်းရုံ အနေနဲ့ထားပါ။
– ကြက်သားပြုတ်ထားတဲ့ အရည်ကို သွန်မပစ်ရဘူးကွယ်။
– စိန်ဖြိုးတံဆိတ် တို့ဖူးမှုန့်ရှိတယ်။ တစ်ထုတ်ရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံလောက်ကို ခုနက ပြုတ်ရည်ထဲ ထည့် မီးပေါ်တင်ပြီး မွှေပါ။
– (ဟိ!!! ခိုင်းစရာ နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးရင် :mrgreen:) ကြက်သွန်နီ၊ ဂေါ်ဖီ၊ နံနံပင်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ရှောက်ရွက် ပါးပါးလှီးပြီး တစ်ပုံစီ ပုံခိုင်းထားလိုက်ပါဦး။
– မီးဖိုပေါ်က ပဲရည် အပြစ်အကျဲ လိုသလောက်အနေတော် ပွက်ပြီဆိုပါက (တစ်ဦးချင်း အကြိုက်ပေါ်မူတည်၏) ပန်းကန် တစ်လုံးထဲတွင် ကြက်သားတုံး၊ အရိုးတုံးလေးများထည့်၊ ခုနက ပါးပါးလှီးပြီးသား အရာတွေထည့်၊ပြီးရင် ပဲရည်လေး ထည့်ကာ နယ်လိုက်ပါ။ အပေါ့အငံ ကိုယ်လိုသလိုပြင်ပြီးတာနဲ့ စားလို့ရပြီဖြစ်၏။
ကြိုက်တတ်ရင် စမူစာလေးကြော်ပြီးတွဲစားလို့ရသလို တစ်ချို့က အာလူးပြုတ်ပြီး ထည့်စားတတ်ပါတယ်။ အစပ်ကဲတာမှ ကြိုက်ရင် ငရုတ်သီးမှုန့်ပါ ထည့်လို့ရပါသည်။ စမူစာကိုလည်း ဒီနည်းနဲ့ သုပ်စားလို့ရတယ်ပြောတယ်။ မစမ်းသပ်ကြည့်ရသေးပါ။
ဒီအတိုင်း နေ့လည် အစာပြေပဲ စားစား။
ဟို အရည် (အဲ) အချိုရည်နဲ့ မြည်းမြည်း။ :harr:
ခုတလော ကုလားစာ ဒါတ်ကျ နေပါတယ် ဆိုမှ …အေ…
နေ့လည် နမ် သွားစားပါအုံးမည်….
ဒီနေ့ ငါ့ ရုံးက မင်းသားကြီး မွေးနေ့ အေ့။
ညည်းနဲ့ မွေးရက် တူတူပဲ။
သူ ရှားရှားပါးပါး ကြိုက်တဲ့ ကုလားစာမို့ ဒီနေ့ တင်လိုက်တာ။
ကြက်သားတွေချည်းပဲ ဆယ်ထားပြီး (ခိုင်းစရာလူ တစ်ယောက်ရှိပါက ) တဲ့ ။
အင်း ဒီနည်းကို မဒမ်ကိုပြပြီး လုပ်စားရင်တော့ ခိုင်းစရာလူတစ်ယောက်က ခင်ခ ဘဲရှိသမို့
မဲကျတာကိုယ်ဘဲ ဖြစ်တော့မယ်မို့ ပေးပြပြီး လုပ်စားရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားလို့ အဖြေရှာရ ခက်ပြီကွယ်။
ကိုယ်စားချင်တဲ့ အစားအသောက်ဆိုရင်တော့ မဒမ်ခကို ကူညီသင့်တာပေါ့ ကိုခရယ်။
ဟုတ်ကဲ့မှတ်သားသွားပါတယ် ကြက်သားနဲ့ပလာတာကို ပိုကြိုက်ပါတယ်
ကြက်သားနဲ့ ပလာတာက မြည်းလို့ မကောင်းဘူးလားလို့။
ကြက်သားသုပ် အရမ်းကြိုက်တယ် တစ်ခါမှတော့ လုပ်စားဖူးဘူး
အိမ်နား အဲ့လိုအသည်တွေပေါလို့ 0ယ်စားတာ ပုံမှန်ဖောက်သည်တောင် ဖြစ်နေပီ ခိခိ
အဲလို နီးနီးနားနား ဝယ်စားလို့ရနေရင် ဒီလိုတွေ အပင်ပန်းခံပြီး ချက်စားမနေဘူးပေါ့။
ခိုင်ဇာလေးဂ ကြက်သားပြုတ်၊ ရွှေအိ ရွှေကြည် ညီအမတွေက ပဲအိုးတည်၊ အဆာပလာလှီး၊ မိုက်လေးက ဟင်းပွဲပြင်ကြ၊ ဦးကြောင်က ထမင်းစားပွဲမှာ အရံသင့်ထိုင်နေမယ်။ တာဝန်အကျေဆုံးသူကို ထမင်းစားပြီးရင် အာဘွားပေးမယ်။ ကြေးမုံဂျီးကိုတော့ ပန်းကန်ဆေးဖို့ မီးဖိုချောင်မှာ စောင့်ပလေ့စေ…။ :harr:
ဒီ အောင်ကြူးတို့ကတော့ ဒါပဲ။
တစ်ရွာလုံးကို အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကျွေးမှ အောင်ကြူးကို အကူအညီတောင်းဦးမှပဲ။
အုန်းသီးတွေ အဝ ခြစ် ရအောင်။ ဒီလောက် ခြစ် ချင်တဲ့ ကြောင်။ :harr:
ကျန်တဲ့ ခြောက်ရာ စားဖို့
အဲလိုတွေ ခိုင်းခိုင်းနေလို့ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ခိုးရာလိုက်ကုန်တာပေါ့။
ကူးသွားပြီး အမေ့ကို ပြရမယ်
ဟိ.. ဒါလင့်ကို ချက်ကျွေးခိုင်းရမယ်…
ကိုယ့်ကို ကူခိုင်းပြီး ချက်ကျွေးနိုင်မဲ့သူရှာပါ။
တော်ကြာ ဟိုဟာသပုံပြင်ထဲကလို ..ငပိရည်ခပ်ဖို့တယောက် ကြက်ရိုးနွှင်ဖို့တယောက် ကြက်သွန်နွှာဖို့တယောက် ရှာရမယ်ဆို ဒီခေတ် ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ …ဟူး……မစားတော့ပါဘူးနော်…..
ပြေးပြီ……. တက် ကလောက်…….. တက် ကလောက်…..
နာကိုယ်ဒေါ် မိဖုရားစွံမှ ..
ဂလိုမျိုး ချက်ကျွေးဖို့ ပေါရမယ် …
ခုဒေါ့ .. တံတွေးဘဲ မျိုချတွားဒယ် .. ငွင်းး ငွင်းး
မိဖုရားရမှ ချက်ကျွေးခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ အံစာ
နောက်ထပ်ခိုင်းစရာတယောက်ရှိနေသေးပါရင်. အဲဒါကိုပဲ.. ဟင်းအိုးထဲထည့်လိုက်ပေတော့.. သုပ်စားစား..ပြုတ်စားစား.. စားကောင်းပါတယ်..။
သူကြီး ကို အလည်ခေါ်ပြီး အဲဒီလို ချက်ကျွေးပေးလိုက် ခိုင်ဇာရေ့။
ကျနော်ရေးတဲ့ အကူက အတူနေထဲကဆို သက်ဆိုင်ရာတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုပဲ ညွှန်းပါတယ်ဗျာ။
ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိချင်လို့ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိဖို့ စဉ်းစားကြတာတုန်း။
သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရှိရင်တော့ ကူမဲ့သူ အများကြီးပေါ့နော့။ အဲလို တွေးကြပါလေ။
ကိုအောင့် လိုဘဲ ကြက်သား ပလာတာ ကို ပိုကြိုက်တယ်။
ဒါကိုလဲ မကြိုက်ဘူး မပြောဘူးနော်။
ပုံလေးကြည့်ပြီး သားရည်ကျ သွားပါတယ်။
ဒါထက် အိန္ဒိယတိုင်း အစာသာဆိုတယ်။ မဆလ မပါပါလား။
(မဆလ = မဆလာ)
ကျမတို့သက်တမ်းတစ်လျှောက်ကြုံခဲ့ရတဲ့ မဆလ ကြီးကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတနေတယ်ထင်ပ့ါ။
ခုတော့ ခိုင့်ကြောင့် လုပ်စားတတ်သွားပြီ။
မဆလ ကိစ္စက ဒီလိုပါ။
၁) ကျနော် မုန့်လုပ်ရင် ရုံးက လူတွေ ကြိုက်တတ်တဲ့ တေ့(စ) မျိုး စဉ်းစားရတဲ့ အတွက် ပါသင့်တိုင်း မထည့်နိုင်လို့ကတစ်မျိုး
၂) ပစ္စည်းစုံမှ မချက်ပဲ ချက်ချင်မှ ပစ္စည်းလိုက်ရှာရတဲ့ အပျင်းမမို့တစ်သွယ်
၃) ဗမာ ပြည်က မဆလာမဟုတ်ရင် ခံတွင်းမတွေ့လို့ မထည့်ချင်တာရော တစ်ဖုံ
၄) ကိုယ်ချက်ချင်သလိုတွေချက်ပြီး Indianစာ စစ်စစ်လို့လည်း မပြောရဲတာ တစ်ကြောင်း
ထင်ရာမြင်ရာနည်းတွေမို့ အတည်မယူဆစေလိုပါ။ :harr:
မမခိုင်ဇာရေ…ပုံကြည့်ရင်းနဲ့တောင် စားချင်စိတ်ကြောင့် သားရေယိုမိပါတယ်…
ဟီးဟီး ……….တချို့ကျတော့လဲ အုန်းနို့နဲ့ချက်တာ တွေ့ဖူးတယ်..အနံကတော့မွှေးတော်တော်လေးမွှေးတယ်..အီတယ်
စားဖူးသေးဘူး ဆွိ ။ ခိုင်းစရာလည်း မရှိ ကိုယ်တိုင်လည်း မချက်ချင်လို့ ၀ယ်စားမှပဲ ရတော့မယ်
ရန်ကုန်မှာလည်း မွေးမြူရေးကြက်သာ ဝယ်လို့ လွယ်တာမို့ 
အုန်းနို့ လေးထည့် တာပိုကြိုက်တယ် ။
အုန်းနို့ နဲ့တော့ ကျနော် ကိုယ်တိုင်မကြိုက်လို့ မမှတ်ဖူး၊ မချက်ဖူးဘူး ကိုဆာမိ။
ဒါက တောကြက် အရိုးများများနဲ့ချက်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။